Hafindra monina ireo voaheloka mandra-pahafatiny hoy RANDRIANASOLO Jacques - Ao Raha du 8 mars 2019 - Madagascar : la corruption au sein de la Justice illustrée par les articles de presse
Accueil Antanimora Hafindra monina ireo voaheloka mandra-pahafatiny hoy RANDRIANASOLO Jacques – Ao Raha du...
Afaka enim-bolana dia hitsangana ny fonja natokana ho an’ireo gadra voaheloka mandra-pahafatiny sy ireo nanao heloka goavana, araka ny nambaran’ny minisitry ny Fitsarana, Randrianasolo Jacques, teny Faravohitra, omaly, nandritra ny fanoloran’ny Vondrona Eoropeanina fiara tsy mataho­ dalana miisa efatra ho an’ny Sampandraharaha misahana ny fandrindrana sy fanaraha-maso ny rantsam-pitsarana sy ny fonja (BCCJEP). Efa hita ny toerana hanatanterahana ny fotodrafitrasa fa ny fanombohana ny asa sisa no andrasana, araka ny fanazavana nomen’ity minisitra ity hatrany.
Isan’ireo nasongadiny tao anatin’izany i Stéphanie Roger Lala, izay voaheloka mandra-pahafatiny, noho ny raharaha fakàna an-keriny. «Misy ilay gadra iray avy any Antsiranana, Stéphanie Roger Lala, mpaka an-keriny izay efa voaheloka mandra-pahafatiny, izay efa hanamboarana trano manokana hitazonana azy eny Antanimora », hoy izy. Isan’ireo voasokajy ho olona atahorana ihany koa Razaimamonjy Claudine, araka ny voalazany hatrany.
«Niteraka resabe teo anivon’ireo fianakaviana manana mpifonja eny Antanimora ny nanorenana trano manokana ho azy. Isan’ireo atahorana izy matoa nafindra», hoy hatrany izy. «Samy tsy azo ampiarahina anaty toerana iray izy ireo satria mbola misy hatrany ny tetika ratsy izay mety hataon’izy ireo. Nisy, noho izany, ny fanapahan-kevitra izay avy any ambony mihitsy mahakasika ny hanasarahana azy ireo, ka ity trano vaovao ity no vahaolana haingana indrindra. Tsy ho an-dRazaimamonjy Claudine irery ihany nefa fa mila afindra ihany koa i Stéphanie Roger Lala satria efa manomboka mitarika ireo vehivavy hafa hikomy», hoy ny fanazavan’ ny minisitry ny Fitsarana. Vonjimaika ihany, araka izany, ity fanamboarana trano hafa eny anivon’ny fonja ity fa ho avy ny fotodrafitrasa izay natokana ho an’ireo nanao heloka goavana.
Ankoatra ny fananganana fonja dia nasian-teny ihany koa ny fitantanana eny anivon’ny Fitsarana. Navohitran’ny minisitra Randrianasolo Jacques ny hametrahana paikady manaraka ny teknôlôjia entina hitantanana ireo antontan-taratasim-pitsarana rehetra. «Atsy ho atsy, tsy hihoatra ny enim-bolana, dia efa anatina tambajotra elektrônika avokoa ny raharaham­ pitsarana rehetra. Hapetraka ny fanamarinana ireo miditra sy mivoaka ny fitsarana. Hisy ny fanaraha-maso amin’ny alalan’ny «caméras de surveillance» ny ao amin’ny fitsarana manontolo hialana amin’ny fisian’ny tsolotra sy kolikoly samihafa izay mampikaikaika ireo manana raharaha eny anivon’ny Fitsarana. Marobe tokoa mantsv ireo misolokv maka vola, tsy ireo avy any ivelany ihany tsy akory, fa na izao mpiasa aza», hoy hatrany ny fanazavan’ny minisitra.
Article précédentLa lutte contre la corruption engagée par l’actuel régime fait jaser car teintée de connotation politique – Expressmada du 8 mars 2019
Article suivantTsy hitsitsy amin’ny fandikan-dalàna ny fitsarana hoy RANDRIANASOLO Jacques – Ao Raha du 8 mars 2019